Tsy maintsy miteny ve, manoloana olona mijaly? (2)
"Dia namaly Joba ka nanao hoe: Efa nandre zavatra maro toy izany aho; mpampionona mahasorisorena foana ianareo rehetra. Efa tapitra va izay ny bedibedy foana?" Joba 16:1,2,3
"Ary Joba dia namaly an’i Jehovah ka nanao hoe: … Fandrenesan’ny sofina ihany no nandrenesako Anao; fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita Anao." Joba 42:1,5
Hafahafa raha ity tantaran’i Joba ity. Andaniny, lehilahy iray antsoina hoe Joba, heniky ny fitahian’Andriamanitra, no voatsipy tampoka tao anaty fahoriana lalina. Nilaza ny tenany ho tsy manan-tsiny izy, teo anatrehan’Ilay Andriamanitra Izay toa tsy niraika akory tamin’ny fahoriany. Ankilany, ny vadiny dia nitaona Azy hahafoy an’Andriamanitra, ary ireo sakaizany dia niampanga azy tamina lahateny “teolojika” tsy misy hokianina, niezaka hanazava fa matoa tonga ny fahoriana, dia satria naniratsira an’Andriamanitra i Joba.
Lahateny mampitahotra, tsy manao afa-tsy ny miampanga ilay lehilahy mahantra izay lazainy fa ampiononiny. Any amin’ny faran’io boky io anefa Andriamanitra dia manambara fa ny filazan’i Joba irery no marina, fa ireo sakaizany kosa, izay nihambo ho mpisolo vava an’Andriamanitra, dia nomeny tsiny. Lesona lehibe tokony horaisina izany: sakanany ireo teny mora mivoaka sy ireo lahateny lavareny, izay tsy mahatakatra na ny lalan’ny fijaliana na ny tanjony.
Ny bokin’i Joba nefa dia mihoatra lavitra izany fampitandremana izany. Ampianariny isika fa misy fizahan-toetra ilaina diavin’ny mpino, ary mitondra vokatra be lavitra noho izay rijan-kevitra mety ho tonga ao an-tsaina. Eo amin’ny toerana ahatsapana zavatra mampangirifiry tsy laitra zakaina, no ampiakaran’Andriamanitra antsika hihoatra ireo fisainantsika. Navelany hahita Azy sy hahatakatra izay nataony i Joba. Niaiky avy hatrany ny fahantrany ara-panahy i Joba, fa ny fony kosa dia feno ny fitiavan’Andriamanitra. Nanjary afaka nivavaka izy, ho an’ireo nanome tsiny mavesatra azy tao anatin’ny fahoriany. Tsy nampoizina mihitsy, fa ao amin’ny fiafaran’ny boky, dia hoy i Joba niresaka tamin’Andriamanitra: “Fandrenesan’ny sofina ihany no nandrenesako Anao ; fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita Anao”.